Thwebula Easeus Partition Master 11.9 Professional... – Vessoft
Thwebula Easeus Partition Master
Easeus Hlukanisa Master – isofthiwe ngokusebenzisana oshayelayo kanzima kanye nezinye izinto ezithwala idatha. Amathuluzi esemqoka isofthiwe zihlanganisa: Umphathi oluhlukanisayo, alulame idatha, ikhophi izindilinga eziyizicaba, abathwali scan usekhona imikhakha ezilimele njll Easeus Hlukanisa Master kwenza a masinyane adale, susa, futhi ushintshe isimo ubukhulu ngodonga. Isofthiwe kwenza ukuhlinzeka igama of idatha yomsebenzisi esebenzisa umsebenzi yokucasha noma ulwazi ukubonisa phezu disk.
Izici ezithuthukisiwe emsebenzini nge data ezithwala
Umbono eningiliziwe ngodonga, amadiski namafayela kohlelo
Ukuhlolisisa uhlelo ukutholakala imikhakha ezilimele
Ukucasha nokubonisa idatha
Amazwana on Easeus Partition Master:
Easeus Partition Master Ahlobene software:
Akwazi ukugcina Isofthiwe ukusebenza nge akwazi of izinhlobo ezahlukene. Zikhona amathuluzi ukurekhoda, uhlele bese uhlanza idatha futhi ukudala disk izithombe.
Graphics and design Umholi wezwe design ezenzakalelayo kanye Umdwebo in imikhakha ehlukahlukene. Isofthiwe isekela umsebenzi 2D kanye 3D amaphrojekthi.